Vine ahụ ọ bụ Diamond dị na Nsogbu nke Azụmaahịa Ọha? | Martech Zone
Mgbe m nọ na IRCE, Enwere m obi ụtọ mgbe otu ọkà okwu, Danny Gavin, kwụsịrị m ma gwa m na ọ hụla m ka m na-ekwu okwu ọtụtụ afọ gara aga na ihe omume na Austin. Danny bu otu n’ime ndi ahia kachasi elu nke… na emepe ahia …ntanetị na mgbasa ozi mgbasa ozi Brian Gavin Daimọn. Site na nka ya, enyerela ya aka ịkwalite BGD n'ogo nke 1000lọ Ọrụ E-Azụmaahịa Na-eto Eto Na-ere Ntaneti nke 50 na XNUMX Ọsọ.
Anyị ga-eso ụfọdụ dị ịtụnanya Mkpụrụ osisi BGD loops na post a site na Brian Gavin Diamonds, itinye ụfọdụ visuals ka ha megoro ikpo okwu.
Site n'echiche gaa na imepụta
Ajụrụ m Danny ihe mere o ji nọrọ ebe ahụ wee gwa m na ya na-ekwu maka nnukwu ọganiihu BGD nwere vine. Anyị anaghị ekwu obere ọnụọgụ ebe a:
N'iji Vine influencers, BGD nwee ike iru ihe karịrị 6 nde loops na Vine (nke bụ ihe dịka nde mmadụ 2) na ihe karịrị 445 na Twitter.
Mgbasa Ozi Vine ha nwetara nnukwu nkwanye ugwu site na ọtụtụ mbipụta, yana ahọpụtara # 2 naanị n'azụ Tiffany maka mkpọsa ahịa ụlọ ahịa ọla mma na 2014 (JCK).
Agbanyeghị mbelata n’ahịa ndị asọmpi n’etiti Black Friday na ekeresimesi, BGD natara ndekọ 45% YOY yana 13% YOY na Q1 nke 2015.
BGD hụkwara mmụba 20% dị ịrịba ama nke ọnụọgụ okporo ụzọ gaa ebe nrụọrụ weebụ sitere na ọkara mbụ nke 2014.
Nke ahụ abụghị ọrụ dị mfe nyere asọmpi na-eme ihe ike na ụlọ ọrụ a. Brian Gavin Daimọn bụ a onwe-kwụrụ ụgwọ omenala jeweler na diamond e-tailer na-agbalị dịkwuo ika mmata online mgbe mpi na nnukwu ọnụ ọgụgụ mmefu ego nke ya ndị asọmpi.
Ihe ịma aka bu na BGD choro ichota uzo di oke onu ahia iji merie ndi na-acho ntaneti na ndi ozo site na iji mgbasa ozi ndi mmadu nke ga-eme ka njirimara di elu bawanye ahia weebụ ma nwekwuo ahia.
Atụmatụ Danny bụ ịmepụta kalenda ederede na-agbanwe agbanwe nke mere ka BGD nwee ike ịnweta ihe omume na oge kwesịrị ekwesị site na ịhapụ vidiyo kwa izu na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ na ikpo okwu nwere oke oke.
Ha mepụtara echiche gburugburu kalenda isiokwu anyị, mepụta ọdịnaya vidiyo, ma bulie ya site na ọwa mgbasa ozi ha na yana Vine influencers ha ruru.
Inye ekele Vine
Osisi vaịn ekeresimesi
Toneda na ụzọ nke ozi okike iji dozie ọnụnọ anyị n'ịntanetị na ihe oyiyi anyị na-anọghị n'ịntanetị nke ịdị mma na ihe ọhụrụ. Iji nwee ike ịsọ mpi na ndị asọmpi mmefu ego dị elu, anyị kwesịrị ịhọrọ onye na-ekwuchitere ndị na-ege ha ntị (18-44) bụ, mana ebe ndị asọmpi anyị na-anọghị.
Osisi vaịn Halloween
Site n'iji Vine mee ihe, BGD abụghị naanị ike ịbanye n'ime ndị na-eto eto (18-20) n'elu ikpo okwu, kamakwa ndị na-ege ntị na Twitter (18-49) n'ihi oke oke na mwekota nke nyiwe abụọ ahụ. Ọdịnaya a doro anya, na-atọ ụtọ, ma dịkwa iche, mana ọ na-aga ngwa ngwa iji chọọ onye nkiri ka ọ lelee ya ọzọ.
Abali anọ nke July
Typesdị vidiyo ndị a jikọtara na ọgbọ mkpanaka (nke na-agbago maka igwe mmadụ gụrụ akwụkwọ karịa) ma dị mkpụmkpụ iji dọpụ uche na ịkụzi ihe n'emebighị ndị na-ekiri ya oge. Approachzọ a na ụda dị irè n'ịgbagharị okporo ụzọ na weebụsaịtị yana ịkwọ ụgbọala.
Special ekele Danny maka inyere m aka tinye a post! Jide n'aka na ị gara Brian Gavin Daimọn n'ihi na gị na omenala ọla!
Tags: ola diamond brian gavinikpe ọmụmụdanny gavinazụmahịa azụmahịaecommerce mmadụvineosisi vaịn mkpọsavine ikpe ọmụmụazụmahịa vaịnosisi loopsnsonaazụ vaịn